sai nyunt lwin: March 2013
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း (ရှမ်းပြည်နယ်/ ကယားပြည်နယ်)
ယခုကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် လာကြသော နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အပစ်ရပ်စဲထားကြသော ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လေ့လာကြသော လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေကြောင်း ရှေးဦးစွာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး အနေနဲ့ အခုဆွေးနွေးပွဲမှာ လာရောက်တွေ့ဆုံ ခင်မင်ရင်းနှီးကြပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ အတွေ့အကြုံခြင်း၊ သဘောထားအမြင်ခြင်း နှီးနှောဖလှယ်ခွင့်ရခြင်းဟာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အရေးကြီး တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခွင့်အရေးကြီးကို အသုံးချပြီး ကျွန်တော်တို့တတွေရဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်/ကယားပြည်နယ်အတွက် အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အဓွန့်ရှည်ရာ ရှည်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ရာ ဖြစ်ကြောင်းများကို အကျိုးရှိရှိ ဆွေးနွေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က များစွာမျှော်လင့်ထားတယ် ဆိုတာကို ပြောကြားလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်တွေအတွက် အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ အလိုအပ်ဆုံးအရာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓွန့်ရှည်ကြာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်အတွင်းက အဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်းကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းလုံးက အခြားလူမျိုး ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နားလည်မှုရှိရှိ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သဘောပေါက်ယုံတင်မကဘဲ ယုံကြည်မှု ရှိဖို့ဆိုတာ အလွန်ကို အရေးကြီးပါကြောင်း တင်ပြလိုပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မယုံမကြည်နိုင် သံသယတွေဝင်နေမှတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မိတ်ဆွေဖွဲ့ နိုင်ပါတော့မလဲ။
ယုံကြည်မှု မရှိရင် ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်း ဘယ်လိုမှ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး မတည်မြဲရင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုကြီးလည်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင် ပြန်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက စလို့ ဒီကနေ့အထိ ရရှိခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အဖြစ်အပျက်တွေကနေ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာက သက်သေပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမလိုချင်ဘူးလားလို့ မေးလိုက်ရင် လူတိုင်းက လိုချင်တယ်လို့ပြောတတ်ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ ဆိုပြီး ထပ်မေးလိုက်ရင်တော့ လူတိုင်းက မဖြေနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခု လက်တွေ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ဘာတွေကို ဘယ်လို ဆောင်ရွက်နေကြတာကို လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။
အစိုးရဘက်က ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီနဲ့ လုပ်ငန်းကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်းပြီး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ အခု ဆိုရင်ဘဲ အားလုံးနီးပါးက အပစ်အခတ် ရပ်စဲနေပြီလို့ အစိုးဘက်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ဒေသ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ထိတွေ့မှုတွေက ပြောက်ကျားပြောက်ကျား ဖြစ်နေတာလဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ မကြာမီ ရက်ပိုင်း အတွင်းကတော့ တရုတ်ပြည် ရွှေလီမြို့မှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ စနိုင်ဖို့ စတင်ဆွေးနွေးနေတာလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ဘာဘဲပြောပြော ဒီအခြေအနေကို ကြိုဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာတော့ အပစ်အခတ် ရပ်ထားတဲ့ဒေသတွေထဲကို အစိုးရတပ်တွေက နေရာယူ တိုးချဲ့လာနေတဲ့ သတင်းတွေကိုလည်း စိတ်ပူစရာ ကြားသိနေရပြန်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ရေမှုတ်တစ်ဖက်၊ မီးစတစ်ဖက် လုပ်နေတယ်လို့ စွပ်စွဲသံတွေလည်း ကြားနေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ကို ပျက်ပြားစေမဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှကို မပြုစေချင်ပါဘူး။ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် စစ်မှန်တဲ့ စေတနာ၊ ကောင်းမြတ်တဲ့ စိတ်ထားတွေကိုဘဲ ထားစေချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာကို ကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲဝင်ပြီးကတည်းက နိုင်ငံတော်ရဲ့ အခြေအနေတွေက ပြောင်းလာပါတယ်။ ပါတီတွေအပေါ် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ် ဖမ်းဆီးမှုတွေ ပျောက်သွားပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးတာ၊ စာပေရေးသားမှုတွေ ဖြေလျှော့ပေးတာတွေဟာ ဒီမိုကရေစီခေတ်ကာလဆီကို အသွင်ပြောင်းနေတဲ့သဘောလို့ ယေဘူယျအားဖြင့်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လက်ခံတွေ့ဆုံလာတာတွေဟာ ကောင်းသောလက္ခဏာတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကလည်း ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးလာကြပြီး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုတောင် ပေးလာကြပါတယ်။
ဒီလိုကောင်းသော လက္ခဏာတွေနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်လာစေချင်တာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုတဲ့ ကိစ္စကြီးဟာ အမှန်တကယ် ဖြစ်မြောက်နေပြီလား ဆိုပြီး မေးခဲ့ရင်တော့ မှန်ပါတယ်လို့ ဖြေဆိုဖို့ ခက်နေပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လေ့လာမိသလောက်ကို တင်ပြရမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကိစ္စဟာ စတင် နေတယ်ဆိုတာတော့ မငြင်းချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စခါစ ကလေးဘဲလို့ ပြောရပါမယ်။ အချိန်မရွေး နောက်ပြန်လှည့်သွားနိုင်သလို ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ အချိန်မရွေးလည်း နစ်မြှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ အင်မတန်ကို သတိကြီးကြီးထား ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အမြဲပြောနေတဲ့ တန်းတူညီမျှသော ပြည်ထေင်စုကြီး ဖြစ်ဖို့ ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်ဖို့၊ ပင်လုံစာချုပ် သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်ဖို့ စတာတွေကိုတော့ အားလုံးသိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီအချက်တွေကို ပြောနေဆိုနေ ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့ထဲ တစ်မျိုးထဲ အတွက်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ကျင်းပနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့တစ်စု တစ်ပြည်နယ်ထဲအတွက် ဆွေးနွေးနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိမိတစ်ဦးတည်းအတွက် တောင်းဆို လုပ်ကိုင်နေရမယ့် အချိန်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုလည်း မလုပ်ဆောင်သင့်ပါဘူး။ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်လည်း အောင်မြင်မှု လုံးဝ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ဟာ အားလုံးအတွက် တစ်ပြည်လုံးအတွက် ပြည်ထောင်စုကြီး တစ်ခုလုံးအတွက် ပြောဆိုလုပ်ကိုင် ဆွေးနွေးကြရမယ့် အချိန်အခါသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးတင်ပြနေတာဟာ လူမျိုးစွဲ၊ ပါတီစွဲနဲ့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှမ်းပြည်သား စိတ်ဓါတ်နဲ့ ပြောနေသလို တစ်ချိန်ထဲမှာဘဲ ပြည်ထောင်စုသား စိတ်ဓါတ်နဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာ ကျွန်တော်တို့ တင်ပြခဲ့သလို အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ အခြေအနေကို လေ့လာကြည့် ကြရအောင်ပါ။ မကြာခင်က သတင်းတွေမှာ ပြောကြတာက နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုပေးတော့မယ်။ ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ လိုချင်နေတဲ့ တန်းတူရေးဆိုတာနဲ့ နီးစပ်လာတာ မဟုတ်ဘူးလား စသဖြင့်မေးကြပါတယ်။ ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသား စာပေတွေကိုလည်း သင်ကြားခွင့်ပေးတော့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် သမ္မတကြီးက အခြေခံဥပဒေကို ကျော်ပြီး မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုပေးမယ်ဆိုတာ အခြေခံဥပဒေက ခွင့်ပြုသလောက်ဘဲ ရမှာပါ။ ဒီ့ထက်ပိုချင်ရင်တော့ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်မှ ရနိုင်မှာပါ။ အခု အခြေခံဥပဒေမှာ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး မပါပါဘူး။ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ ဆရာတစ်ယောက်ကို မခန့်နိုင်ပါဘူး။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကိုလည်း မခန့်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ့်တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ကို ကိုယ်ကိုတိုင်ခန့်အပ်ခွင့် မရှိသလိုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရမယ့် အချက်တွေထဲက ထင်းရှားတာလေးကို ရွေးပြီး ပြောလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကိစ္စကတော့ မကြာခင် အချိန်မှာဘဲ ကြေကြေလည်လည် ဆွေးနွေးကြရတော့မယ့် ဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ ဒီကိစ္စဟာ ဘယ်လိုမှ မရှောင်လွဲနိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က လေးလေးနက်နက် လက်ခံယုံကြည်ထားပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ ဆောင်ရွက်ကြရာမှာ ပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်ချင်းအလိုက်ရော တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုချင်းအလိုက်ရော အဲဒီမှာရှိနေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး ညှိနှိုင်းထားကြပြီး လက်ချင်းခိုင်ခိုင် ချိတ်ဆွဲထားကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးကြရမယ့် ဘာသာရပ်တွေက အတော်ကို များနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဥပဒေအတိုင်း ကျင့်သုံးဖို့ တနည်းအားဖြင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးရှိဖို့ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးကိစ္စ၊ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာကွာဟ နေမှုကိစ္စ၊ ပညာရေးကိစ္စ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စ၊ အခွန်အကောက်တွေကိစ္စ၊ စ သဖြင့် ဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာကို ကျွန်တော်တို့ ပြောကြဆိုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကိုင်းကကျွန်းကို မှီခိုရသလို ကျွန်းကလည်း ကိုင်းကိုပြန်ပြီး မှီခိုရတဲ့သဘောလိုမျိုး ပြည်ထောင်စုကြီး သာယာဝပြောမှ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း သာယာဝပြောမှာဖြစ်သလို ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း သာယာဝပြောမှလည်း ပြည်ထောင်စုကြီးလည်း သာယာဝပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြေခံ အကျဆုံးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်တွေမှာ ညီညွတ်မှုရအောင်၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ယုံကြည်အောင်၊ လေးစားအောင်၊ သဘောပေါက်လာအောင်၊ လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့ မသင့်ပေဘူးလားဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒါ မဖြစ်မနေ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ထားကြရမယ့် ကိစ္စတစ်ခု အဖြစ်သဘောထားကြောင်း တင်ပြလိုပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလိုမျိုးကို လုပ်ပုံလုပ်နည်း မတူကြပေမဲ့ တစ်ခြား ပြည်နယ်တွေမှာလည်း အသီးသီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတာ သိထားရပါတယ်။ ပြည်နယ်တွေဖက်က ပြီးသွားခဲ့ရင် ပြည်နယ်ပေါင်းစုံဆွေးနွေးပွဲမျိုးကိုလည်း မျှော်လင့်နိုင်ပါသေးတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးတွေကလည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်ကို အေးချမ်းစေချင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်။ တခြားပြည်နယ်တွေကိုလည်း အလားတူ ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေဟာ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီးတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ဆိုတာ နေ့ချင်းညချင်းဖိတ်ကြားပြီး ကျင်းပလိုက်ရုံနဲ့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြေကြေလည်လည် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ တစ်ဆင့်ချင်းသွားမှသာ ပြေလည်မှု အောင်မြင်မှု ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ကျွန်တော်တို့တတွေရဲ့ ဆွေးနွေးနေကြခြင်းဟာ ပြည်ထောင်စုကြီး ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ အထောက်အကူတစ်ခု လှေခါးထစ်တစ်ခုလို့ ဆိုရင် မမှားနိုင်ပါဘူး။
အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အဆင့်တွေ ကျန်နေပါသေးတယ်။ အခု အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ စတင် ကျင်းပသွားဖို့ ကျန်နေပါသေးတယ်။ အပစ်ရပ် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးဖို့ လုပ်ဆောင် ရပါလိမ့်မယ်။ အခု အပစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အန္တိမရည်ရွယ်ချက်ဟာ နိုင်ငံရေးဘဲ ဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ထားပါတယ်။ အဓိက ကတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာ ပြေလည်မှုရဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပြေလည်မှုရမှသာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆိုတာ ရှိမှလည်း အစိုးရက ပြောပြောနေတဲ့ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်ဆိုတာကို တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ပြည်ထဲနေ တစ်ရေထဲသောက် အချင်းချင်းတွေ ဖြစ်နေကြတာမို့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ -
ပထမဆုံးကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိပြီး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကတော့ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်း ထားရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယကတော့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စတုတ္ထကတော့ ကတိတဝတ် တည်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဒီအချိန်မျိုးမှာ မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက် လုပ်နေလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်က တစ်မျိုးပြောပြီး ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲကဘဲ နောက်တစ်ယောက်က နောက်တစ်မျိုးပြောနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပြောသလို ကိုယ့်လုပ်ရပ် တွေကလည်း ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံကြည်မှုဆိုတာ အဲသလို ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ခင်ခင်မင်မင် ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ နတ်ရေကန်ထဲ ခုန်ဆင်းလိုက်သလို ချက်ချင်းကြီး ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ သစ်ပင်တစ်ပင်ကို ပျိုးထောင်ရသလို ရေလောင်းပေါင်းသင် တစ်ဖြည်းဖြည်း ချင်းပြုစု ယူမှ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဥပမာလိုပါဘဲ ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်/ကယားပြည်နယ်က အဖွဲ့အစည်း တွေအနေနဲ့လဲ ဒီတစ်ကြိမ်ထဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားရုံနဲ့တင် ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ ယူဆ မထားစေချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ကြိမ်ပြီး တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြရအုံးမယ်ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံထားကြ စေချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့လို တွေ့ဆုံမှုဟာ ကနဦးတွေ့ဆုံကြပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးသွားကြရုံတင်မကဘဲ နောင် အခါတွေမှာ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ ဝင်ထွက်သွားလာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသွားကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းပိုမိုခိုင်မာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးလည်း ပိုမို ယုံကြည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အကျိုးကိုလည်း ကျရာအခန်းကဏ္ဍ ကနေပြီး ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက် သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်/ကယားပြည်နယ် အတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရာ ယခုလို အတတ်နိုင်ဆုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ သလိုပဲ နောင်ကာလတွေမှာလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ် ဆိုတာပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ ၊ ၂၁ ၊ ၂၂ ရက်နေ့များတွင် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးမြို့ ၊ လားရှိုးမိုတယ်တွင် ကျင်းပသည့်
ဆွေးနွေးပွဲသို့ တင်သွင်းသော SNLD ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်
Posted by sainyuntlwin at 15:250comments
မေး- ရှမ်းပြည်နယ်က ကျယ်ပြန့်တယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ရှမ်းတစ်မျိုးတည်းနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပလောင်၊ ပအိုဝ်းတွေရော အခြား တိုင်းရင်းသား တွေရော ပေါင်းစုံနေ နေကြတော့ အန်ကယ်တို့က ဖယ်ဒရယ်ကို တောင်းဆိုနေကြတော့ တကယ်လို့ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် တခြား တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ရော စဉ်းစားတာရှိပါသလား။
ဖြေ - ဖယ်ဒရယ် ရခဲ့ရင် ရှမ်းတစ်မျိုးထဲ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စု တစ်ခုလုံး ရမှာပါ။ ကိုယ့်တစ်မျိုးထဲအတွက် သီးသန့် တောင်းဆိုတယ် ဆိုတာမျိုးက မရှိပါဘူး။ ရှိလည်း မရှိသင့်ပါဘူး။ ရှိခဲ့ရင်လည်း သဘာဝမကျပါဘူး။ ရလည်း မရနိုင်ပါဘူး။ အားလုံးဟာ တန်းတူညီမျှ ဖြစ်ရ မှာပါ။ အခွင့်အရေးတွေ အကုန် ထပ်တူထပ်မျှ တူရမှာပါ။
ခုဆိုရင် ကျနော်တို့ Trust building ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတောင် ဖွဲ့ ပြီးပါပြီ။ ရက်ကိုတော့ မသတ်မှတ်ရသေးဘူး။ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အကုန်ဖိတ်ပါမယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်း ဖိတ်ပါမယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကယားပြည်နယ် နှစ်ပြည်နယ် ပေါင်းပြီးလုပ်ကြမှာပါ။
မေး- ကျနော်တို့ ဗမာတွေက တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာရော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေက တခြား တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်တယ်လို့ ပြောသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်ရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ- သွေးထိုးတဲ့ စကားတွေပါဗျာ။ ရှမ်းတွေက တခြားကိုသွားဖိနှိပ်ဖို့ နေနေသာသာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်မှ လုံအောင် မကာကွယ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သူများကို ဒုက္ခပေးနိုင်မလဲ။ ခွဲခြားထားမှ သွေးကွဲနေမှ အင်အားယုတ်လျှော့နေမှာလေ။ ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာ တပ်တွေသိပ်များနေတယ်ဗျာ။ တပ်တွေသိပ်များနေရင် ပြဿနာပိုဖြစ်တတ်တယ်လေ။ ကျနော်တို့ကတော့ တပ်တွေကို လျှော့ချစေချင်တာဘဲ။
မေး- အခု ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အခု အချိန်မှာ အန်ကယ်တို့က ဖယ်ဒရယ်ကို တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် လုပ်နေတာဆိုတော့ လွယ်ကူပါ့မလား။
ဖြေ- လက်နက်ကိုင် သိပ်မများပါဘူး။ ငါးဖွဲ့လောက်ဘဲ ရှိပါတယ်။ ပြဿနာကတော့ ရှိနေတယ်။ စားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဘဲ ပြောဆိုကြရမှာပါ။ တန်းတူတဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာရင် လက်နက်ကိုင်တာတွေလည်း လျှော့သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပါဘဲ။ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေများတယ်ဆိုပေမဲ့ သူတို့နဲ့ စားပွဲဝိုင်းမှာ စကားပြောကြည့်ရင် ဖယ်ဒရယ်ကိစ္စမှာ သူတို့ဟာ အတားအဆီး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တွေ့ကြရမှာပါ။
မေး- ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်နေတဲ့ အထဲမှာ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ မပါတော့ လွယ်ကူပါ့မလား။
ဖြေ- မဖြစ်ပါဘူး။ အခုက point of view ကို ကြည့်ရမှာလေ။ အခု ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေတာက အပစ်အခတ် ရပ်စဲကြတဲ့ အဆင့်ဘဲရှိသေးတာပါ။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ဟိုဘက်ပါရင်လည်း ၁၇(၁) နဲ့ ငြိမယ်။ နောက်တစ်ဖက်က ပါရင်လည်း ၀ိုင်းအပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါက စစ်ရေးကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတပ်ကို ဒီရွေ့ပါ။ ဒီတပ်ကို ဟိုရွေ့ပါ ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ပြောလို့မရဘူး။ သိလည်း မသိကြပါဘူး။ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း မရှိကြပါဘူး။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ကြရင်တော့ ပါ လာရတော့မယ်လို့ ထင်ရတာပါဘဲ။
မေး- အန်ကယ်တို့ ၂၀၁၅ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ရော အစီအစဉ် ရှိပါသလား။
ဖြေ- ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခုထိ ဘာမှ မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ အခု အခြေခံဥပဒေကို ကျနော်တို့က မကြိုက်ဘူးဗျာ။ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်အရတော့ လိုက်နာရတာပေါ့။ ကျနော်တို့ ဦးတည်ချက်ကတော့ အခု အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ရေးပါဘဲ။
မေး- အန်ကယ်တို့ ကျားခေါင်းပါတီကို ရှစ်ပြည်ထောင်မူဝါဒ ကိုင်စွဲထားတဲ့ ခေါင်းမာတဲ့အုပ်စုလို့ ပြောနေကြတယ်။ အန်ကယ့် အမြင်ကရော။
ဖြေ- ရှစ်ပြည်နယ်မူ ဆိုတာ ကျနော်တို့ မူမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ မူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် တောင်ကြီးမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြည်နယ်ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ ညီလာခံကြီးကနေ အကြေအလည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သဘောတူထားခဲ့ကြတဲ့ မူသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီမူကို အမွေခံခဲ့ရတာပါ။ လူကြီးတွေ လုပ်သွားတဲ့ မပြီးသေးတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ဆက်လုပ်နေကြတာပါ။ ကောင်းတာ မကောင်းတာကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့။ အခု ပြောနေတာက ကျနော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုမှုဘဲ။ ကမ်းလှမ်းချက်ဘဲ။ ဆွေးတောင် မဆွေးနွေးရသေးဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကို လိုက်ပြောင်းနေရင် ဘယ်လိုလုပ် ဆက်ဆွေးနွေးကြမလဲ။ သေသေချာချာလေ့လာပြီးမှ ဝေဖန်ရင် အမှန်ကို မြင်မှာပါ။ ကျနော်တို့ လုပ်တာက ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ပါ။ ကိုယ့်တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ့ထက် တန်းတူညီမျှတဲ့ တရားမျှတတဲ့ မူတွေရှိနေရင် ကျနော်တို့ကို ပြောပါလို့ ပြောထားပါတယ်။ အကျိုးအကြောင်းတော့ ဆီလျော်ဖို့ လိုတာပေါ့။ ကျနော်တို့က အာဏာကိစ္စ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ အခြေခံဥပဒေ မှန်ကန်ဖို့ ၊ ပြီးရင် အားလုံးက လိုက်နာဖို့ လုပ်နေတာ။ ဖွဲ့စည်းပုံ ကောင်းရင် ဘယ်သူလုပ်လုပ်ပါ။ အရေးမကြီးပါဘူး။ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ အခု ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းဆိုရင် ဦးခွန်ထွန်းဦး ၀န်ကြီးဝင်လုပ်မယ်ဆိုလည်း ကျနော်တို့ မကြိုက်ပါဘူး။ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေကို ခေါင်းမာတယ်လို့ ပြောရင် မှန်ပါ့မလား။ ဒါကိုမှ ခေါင်းမာတယ်ဆိုရင် ကျန်တာတွေက အညှာလွယ်တယ်လို့ ပြောရမလို ဖြစ်သွားမှာပေ့ါ။
မေး- ဒါဆို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လွှတ်တော်ထဲ မ၀င်ဘဲ ပြင်နိုင်ပါ့မလား။
ဖြေ- အခု အခြေအနေက လွှတ်တော်ထဲမှာကို မပြင်နိုင်တော့လို့ တခြားကို စဉ်းစားလာရတာပါ။ နောက်ပြီး အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြား စေ့ရေးကိစ္စကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကိစ္စက မဖြစ်မနေ ရှောင်လွဲလို့ မရတဲ့ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
မေး- ၂၀၁၅ မှာ NLD က နိုင်ဖို့ များတယ်လေ။ သူတို့တွေ ရောက်သွားပြီဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ လုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကော။
ဖြေ- သူတို့ရောက်သွားရင်တော့ လုပ်မှာပါ။ လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင်၊ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ဒါကိုတော့ စဉ်းစားရမှာပါ။
မေး- လွှတ်တော်ထဲဝင်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပိုအားကောင်းမယ် ထင်တယ်လေ။ အဲဒါကရော ?
ဖြေ- အဲဒီလို ထင်လို့ ဒေါ်စု လွှတ်တော်ထဲကို သွားတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ စစ်တုရင်ကစားပွဲနဲ့ပြောရရင် သူက ဘုရင်မ ပါဘဲ။ ဘယ်အကွက်ကို ရွေ့ရွေ့ ရွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုနစ်ဆယ့်ငါး ရာခိုင်နှုန်းအပြည့် ရအောင်တော့ စည်းရုံးဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ ရတယ်ဘဲထား တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်မပါဘဲလည်း မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး။ နောက်ပြီး တပ်မတော်မှာ အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်။ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ မပြောင်းနိုင်ပေမဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အချိန်မရွေး အပြောင်းအလဲ လုပ်လို့ ရတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကိုယ့်ဖက်ပါအောင် စည်းရုံးနိုင်မလဲ။ ကိုယ့်လူတွေကိုသာ တစ်ဖက်က စည်းရုံးသွားဖို့ များပါတယ်။
လွှတ်တော်က အရေးမကြီးဘူးလို့ ကျနော် မပြောနိုင်ပါဘူး။ သူ့အပိုင်းမှာ လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းကတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြင်ဖို့ မလွယ်တာ အမှန်ပါဘဲ။ အခု မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ကြည့်လိုက်ရင် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလည်း ရှောင်လွဲလို့ မရတဲ့ ၊ မဖြစ်ဖြစ်အောင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရမယ့် ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ရမှာတွေတော့ အများကြီးပါ။ တစ်ဆင့်ချင်း တစ်ဆင့်ချင်း တစ်ခုပြီး တစ်ခု လုပ်သွားရမှာပါ။ အခုဆိုရင် ကျနော်တို့က အချင်းချင်းတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့ နားလည်မှုရှိဖို့ လုပ်နေကြတာပါ။ ရှမ်းပြည်သား စိတ်ဓါတ်နဲ့ လုပ်နေကြသလို တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာလည်း ပြည်ထောင်စုသား စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကျနော် တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်နေကြတာပါ။
( ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ Unity Journal . တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည် )
Posted by sainyuntlwin at 16:050comments
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း (ရှမ်း...